प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा ड. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको उद्घाटन गर्नुहुनेछ | ESD | नेपाली
प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा ड. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको उद्घाटन गर्नुहुनेछ
आज प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा ड. अम्बेडकर अन्तराष्ट्रिय केन्द्रको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। ट्विट मार्फत श्री मोदीले के बताउनुभएको छ भने, यो परिसर बौद्ध एवम् वर्तमान वास्तुकलाको सम्मिश्रण हो। यो भवनमा सम्मेलन कक्षहरू बाहेक तीन रङ्गशालाहरू साथै डिजिटल सुविधाहरूले पूर्ण एक विशाल पुस्तकालय छन्।
प्रधान मन्त्री महोदयले भन्नुभयो, उहाँले ‘सामाजिक आर्थिक कायापलट निम्ति ड. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र’-को थालनी पनि गर्नुहुनेछ। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, यो संस्थानले महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूमा विचार-विमर्श निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नेछ अनि युवाहरूमा अनुसन्धान साथै नयाँ सोच निम्ति प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ।